Herin’ny fanovana : “Hisy hetsi-bahoaka Antananarivo, Fianarantsoa, Toamasina… “ | NewsMada
Herin’ny fanovana : “Hisy hetsi-bahoaka Antananarivo, Fianarantsoa, Toamasina… “
“Nifamory manokana tany Fianarantsoa ny Herin’ny fanavona manerana an’i Madagasikara. Nanapa-kevitra fa tsy eto Antananarivo irery no hasiana hetsi-bahoaka, fa hanao ny any Fianarantsoa, Toamasina, Toliara, Manakara, Farafangana… ”
Izay no nambaran’ny eo anivon’ny Herin’ny fanovana, Ratolojanahary Maharavo, teny Andravoahangy Ambony, omaly, momba ny hetsika famoriam-bahoaka hataon’izy ireo amin’ny herinandro ambony. Ho an’Antananarivo, azo ny 11 aogositra ny fahazoan-dalana avy amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra hamory vahoaka ao amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina ny 22 sy 23 ary ny 25 sy 26 aogositra.
“Meteza ianareo, mba avelao ny olona hivory sy haneho ny heviny, fa tsy sanatria zanatany na andevo”, hoy ny hafany ho an’ny mpitondra fanjakana. Manome izay zo sy fahalalahana izay ny lalàmpanorenana, fa ampy izay ny fanitsakitsahana izany.
Mila mamaly an-tsoratra mazava ny préfet de Police
Milaza ny lalàna lah. 60-082, ny13 aogositra 1960, fa atao amin’ny fangatahana fahazoan-dalana ny famoriam-bahoaka eto Madagasikara. Tsy maintsy mamaly an-tsoratra izany ny préfet de Police na mandà na manaiky, fa tsy vitan’ny famoriana mpanao gazety. Lazaina ny antony raha fandavana no atao, araka ny fanazavany. Napetraka any amin’ny prefektiora izay fangatahana fahazoan-dalana izay, ny 14 aogositra. Manaiky rehefa tsy mamaly izany mandra-pahatonga ny alatsinainy 21 aogositra ny préfet de Police.
Hitory eny amin’ny fitsarana ny Herin’ny fanovana
“Ho an’ny mpitondra fanjakana: tena mbola tsapanareo ve fa mety izao ataonareo izao, mandeha ny firenena? Tsy mba tsapanareo ve fa efa leo ny Gasy? Meteza ianareo, ekeo moramora ny fivoriana hataonay. Tsy milaza aminareo hoe hanongana anareo izahay. Ny fampiasanay ny zonay sy ny fahalalahanay no ataonay”, hoy izy.
Mba tsy hoe tsy hiteny mandra-pahatonga ny alatsinainy hariva; avy eo, haka mpitandro filaminana vandivandy na tsy marina, araka ny fanazavany. Anjaran’ny Herin’ny fanovana ny mitory any amin’ny fitsarana misahana ny ady atao amin’ny fanjakana, raha misy ny fandavana. Antsoiny àry ho tonga eny kianja mitafon’i Mahamasina, ny 22 aogositra ho avy izao, ny vahoaka.